Gọọmentị nke ụwa: usoro LGAF - Geofumadas
Governance nke Earth: na ụkpụrụ LGAF
August, 2013 cadastre, Land Management
A maara ya dị ka LGAF, usoro a na-akpọ n'asụsụ Spanish dị ka Ọkpụrụkpụ maka Nyocha nke Njikwa Ala.
Nke a bụ ngwa eji enyocha ọnọdụ iwu obodo, n'ihe gbasara iwu na omume metụtara amụma ọha na eze nke nwere ala na ojiji. Ọ bụ World Bank na FAO na-akwalite ya, n'etiti ndị ọzọ; A na-etinye ya n'ọrụ na mba ebe akwadoro ọrụ mmezi nchịkwa obodo, dabere na ngosi nke Klaus Deininger, Harris Selod na Tony Burns nọ Ntụle Ntụle Nchịkwa nke Ala: Ịmata ma nyochaa Ezi Omume na Ngalaba Ala.
Nzọụkwụ nke usoro Njikwa nke Ụwa
Otu n'ime ihe omume a nwere bụ na ọ na-enye ohere, site na nyocha, akụkụ na nkwekọrịta na-esochi, iji tinye ndị ọkachamara na ndị ọrụ nyocha iji chọpụta ebe ise ise:
Atụmatụ Nhazi ala, Nchịkwa Ala na Ụtụ
Gọọmentị ala ala
Inye aka n'inwe ihe gbasara ala
Mkpebi Mgbagha na Njikwa Mgbagha
Nke ọ bụla n'ime mpaghara ndị a nwere usoro ihe ngosi dị iche iche, agbadoro anya na ngosipụta ọchịchị obodo 21, gbadara na akụkụ 80 bụ nke ọ ga-ekwe omume iji nwayọ nwayọ mata ọganihu, nsogbu na omume dị mkpa ka njikwa njikwa mpaghara nwere ike bụrụ onye zuru oke maka mmepe. Na mgbakwunye, etinyere modulu abụọ ọzọ, nke jikọtara ya na ọrụ ebe usoro ịchịkwa aha eruola ọkwa dị mkpa na nhazi nke usoro iwu:
Nnweta na Azụmahịa Ndị Dị Ukwuu Na Ụwa
Enwere ike ibudata akwụkwọ a na weebụsaịtị World Bank, n'asụsụ dị iche iche. Otú ọ dị m na-ahapụ ya na Scribd nke bụ ya mere akwụkwọ ndị bara ezigbo uru ji ejedebe na njikọ agbajiri n'oge. Na mkpokọta, akwụkwọ ntuziaka ahụ na-enye usoro nhazi iji hazie ma mejuputa usoro ochichi ụwa, kọwaa ihe ndị achọrọ maka ndị na-ewe ndị ọrụ, na-enye ntuziaka maka nchịkọta data mbido, nhazi nke ngalaba ndị ọkachamara, yana mmejuputa. nke usoro mkparịta ụka nke ọkara wee nye usoro maka ịhazi nsonaazụ.
Ọtụtụ ihe omumu a nwere ike iyi egwu, maka ndị ọkachamara akpọrọ ka ha mata otu ha si eme ihe, ihe kpatara ya, na otu ọ ga - esi ka mma; karịsịa ebe ọ bụ na okwu nchịkwa / steeti na-abụkarị isi okwu nke adịghị ike kachasị ukwuu na mpaghara ebe nchọpụta geomatic na mmepe eruwo ọkwa dị ịtụnanya. Ma na njedebe, ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ isi ihe ndị e jidere n'ọhịa ahụ ga-ejedebe na atumatu ọha na eze na-emepụta akụ na ụba ma melite ọnọdụ obibi nke ndị bi.
Njikwa nke ókèala ahụ na usoro iwu ọha na eze
Ana m etinye akwụkwọ ahụ ebe a, ebe ọ bụ na ọ bara uru maka ọdịmma ọha na eze, ebe m na-atụ aro aro m kachasị mma: "Gịnị kpatara mba ji daa." Ihe kpatara m ji tụọ aro maka njikọta njikọta nke ngwa abụọ a bụ n'ihi na anaghị enye geomatics ịmụ amụ Economics, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kacha pụta ìhè, ebe isiokwu a ga-adị ka ọ maara anyị. Akwụkwọ (Why Nations Fail) bụ nke Daron Acemoglu na James Robinson, nọ n'ọkwá dị elu dabere na ihe atụ, na otu ọhụụ nke ókèala maka mkpebi amụma ọha na eze nwere ike isi bụrụ mkpebi dị mkpa maka mba ịga nke ọma ma ọ bụ ịda.
O yikarịrị ka ịgụ akwụkwọ na ntụrụndụ ga-akpali anyị ezigbo sịga, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke anyị, site n'aka ndị dere ọdịnaya ndị a. Ma karịa egwuregwu ahụ, ọ ga-abụ na ntụgharị uche na-eme ka anyị chee na n'okwu a enwere ọtụtụ ihe a ga-eme, karịa site na omume ọma nke ndị ọzọ karịa site na ntinye nke ihe a nwalere.
Ndị bi na-ahụghị uru ọ bụla, ha nwere ihe onwunwe na aka ha, ma ọ bụrụ na ngalaba Quaternary (gọọmentị) na-eji nwayọ nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ ya.
Ọmụmụ ihe na-ese siga atụmatụ ala, ị nwere ike ịkwụsị na map ụfọdụ a na-ese na mgbidi nke obodo, ma ọ bụrụ na ha ejikọghị ya na atụmatụ mmepe nke na-egosi n'ụzọ dị mfe ka esi eji akụ gị hụ ọhụụ nke ókèala ahụ.
LGAF_Implementation_Spanish_Complete_2013_03_04b Akwụkwọ ntuziaka - copia.docx by G_Alvarez_
Eji eme ihe gbasara nchịkwa ọchịchị ụwa (LGAF)
Maka ugbu a, m ga-arụ ọrụ na ụfọdụ oghere nke usoro a ga-emepe n'akụkụ a nke Mpaghara UTM 15N. Ya mere enwere m olile anya ikwu banyere ya site n'oge ruo n'oge, ma na-eri nri n'ụzọ bara uru ihe nwere ike ịmasị ndị na-agụ akwụkwọ na-amasị ihe ọmụma onye kwuo uche ya.
Previous Post«Previous University mmekọrịta mụ na Cartographer
Next Post Geomatics Magazines - Top 40 Ranknye ọkwaNext »